Slackware 14.1: ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုဖွင့်ပါ Linux မှ
DMoZ | | သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
Slackware ကိုတီထွင် ၎င်းဖြန့်ဝေမှုတစ်ခုသည်သင်ချစ်မြတ်နိုးသည်ဖြစ်စေမုန်းသည်ဖြစ်စေသံသယရှိစရာမုန်းခြင်းမှသည်ချစ်ခြင်းအထိခြေလှမ်းတစ်ခုသာရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သဘောတူလိမ့်မည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိအတွေ့အကြုံမရှိသေးသော (သို့) အတွေ့အကြုံမရှိသောသုံးစွဲသူများကို ဦး တည်စေသောအဓိကအကြောင်းရင်း GNU / Linux များ ဤလှပသောဖြန့်ဖြူးမှုမှထွက်ခွာသွားရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကားဖြင့်စာရွက်စာတမ်းများမရှိခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်လုံးဝမှန်ကန်မှုမရှိသော်လည်းဂူးဂဲလ်မှကိုင်တွယ်ခဲ့သည့်လက်ရှိ algorithms နှင့်အတူရလဒ်များကို ကျော်လွန်၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပျင်းရိမှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မအောင်မြင်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာပြင်များ၏ရှေ့မှောက်၌အချိန်လေး။
ဒီမှာဘယ်မှာလဲ linux မှ အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အထူးသဖြင့်ဆိုက်၏ကြီးကြပ်ရေးမှူးများမှလုပ်ဆောင်သောကျေးဇူးကြောင့်၊ စပိန် Linux ပြောသောအခါရှာဖွေရေး algorithms နှင့်တည်နေရာကိုကျွန်ုပ်တို့ပထမနေရာတွင်ထားရှိသည်။
ငါဒီပြပွဲ၏အားသာချက်ကိုယူပြီးငါဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ အကြံပေးချက်များဆက်တိုက်ဖန်တီးပါ လမ်းကြောင်းပေါ်မှကျွန်ုပ်တို့လမ်းစလျှောက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့ရသောဘုံပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည် ပျင်းရိငါသည်လည်းဒီအစပိုင်းတွင်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပြီးပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်ဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်ထားလိမ့်မည်ဟုရေးသားချက်အတွက်အထှတျအထိလိမ့်မည်ဟုပြောရမယ်, ငါမျှော်လင့် - အဆင့်ဆင့်အားလုံးအသုံးပြုသူများအတွက်ပြည့်စုံလမ်းညွှန်ဖြစ်လိမ့်မည်။
နောက်ထပ် ado မရှိရင်ငါဒီသေးငယ်ပေမယ့်အသုံးဝင်သောသိကောင်းစရာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုအတွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်မဟုတ်သောငါတို့အဘို့အတင်ပြ Slackware ကိုတီထွင်.
1 SlackTip # ၁ ။ Slackware တွင်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုဖွင့်ပါ။ ၁၄.၁
2 လိုက်နာရမည့်အဆင့်များမှာ root ဖြစ်သည်။
SlackTip # ၁ ။ Slackware တွင်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုဖွင့်ပါ။ ၁၄.၁
သင်သည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်အသစ်တပ်ဆင်ပြီးတာနဲ့ Slackware 14.x သင်တွေ့လိမ့်မည် ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်အလုပ်မလုပ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပျင်းရိ ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည် inet1 ဝန်ဆောင်မှုကိုထည့်သွင်းထားသည် (/etc/rc.d/rc.inet1) ကိုဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ configuration ဖိုင်တွင်လိုင်းအနည်းငယ်ကိုရေးရမည်ဖြစ်သည် (/etc/rc.d/rc.inet1.confထိုကဲ့သို့သောအဖိုးတန်သောကွန်ယက်ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူရန်အလို့ငှာဘာသာရပ်နှင့်ပတ်သက်သောဗဟုသုတနည်းပါးသောသူများနှင့်လက်စွဲ setting များ၏ရန်သူများအတွက်၎င်းသည်တကယ့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဖြေရှင်းချက်အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်, ဗားရှင်းကနေသတိရပါ Slackware 14 ထည့်သွင်းထားသည် ကွန်ယက် ကွန်ယက်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်လျှောက်လွှာတစ်ခုအဖြစ်။
Es importante သတိရပါ ပျင်းရိ 14.1 နှင့်သဟဇာတအတွက်အလုပ်လုပ်တယ် စနစ် V အရာမှတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ကို ဦး ဆောင် /etc/rc.d startup ဝန်ဆောင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွက်, Slackware ကိုတီထွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ scripts အားကွပ်ကဲခွင့်ပြုချက်ကိုပေးအပ်ခြင်း (သို့) ငြင်းပယ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အား ၀ န်ဆောင်မှုများလည်ပတ်ရန်နှင့်ရပ်တန့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
လိုက်နာရမည့်အဆင့်များမှာ root ဖြစ်သည်။
1. ငါတို့ရပ်လိုက်တယ် ဝန်ဆောင်မှု inet1
2. ငါတို့ငြင်းတယ် သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်က သတ်ခြင်း
3. ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့သည် ခွင့်ပြုချက် သတ်ခြင်းaကွန်ယက်
၄ ဝန်ဆောင်မှု ကွန်ယက်
ဤအရာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖိုးတန်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်နှင့်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောအပျော်အပါးအားလုံးကိုရရှိလိမ့်မည်။
သငျသညျ Slackware ကြိုးစားရန်မဆုံးဖြတ်ရသေးပါကကျေးဇူးပြုပြီးဤအရေးအသားများကိုစစ်ဆေးပါ။
1. Slackware 14: အနဂါး Down
2. Slackware 14: တပ်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန်
3. Slackware ကိုထည့်သွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမလဲ 14
4. Slackware: Sbopkg နှင့် SlackBuilds, package များကိုအလွယ်တကူ install နိုင်သည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » Slackware 14.1: ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကို Enable
ကောင်းပါတယ်။ Slackware ကပုံမှန်အားဖြင့် NetworkManager ကိုအသုံးမပြုပေမယ့် inet1 ဆိုတာမသိဘူး။
စကားမစပ် inet1 ဖြင့်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုသုံးနိုင်သည်သို့မဟုတ်၎င်းသည်ဝါယာကြိုးကွန်ယက်တစ်ခုတည်းနှင့်သာအလုပ်လုပ်သလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ Networkmanager သည်ပုံမှန်အားဖြင့်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်မဝေးတော့သောအနာဂတ်တွင်ဖြစ်မည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ပါ။ ၎င်းသည်ဖြန့်ဖြူးခြင်းမှဖြန့်ကျက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ inet1 ကို ၀ န်ဆောင်မှုအဖြစ် သုံး၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုလည်းပြုပြင်နိုင်သည်။
၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်မှားယွင်းပါကထည့်သွင်းခြင်း dvd တွင်သင်မှားယွင်းပါကထည့်သွင်းနိုင်သည်။
ငါမကောင်းသောရေးသားထားသောမှတ်ချက်ကိုဖျက်ပစ်ချင်တယ်။ Networmanager ကို install လုပ်နိုင်တဲ့ dvd မှာ install လုပ်နိုင်တယ်၊ ငါကသူ့ဟာသူ activate လုပ်တယ်ဆိုတာတွက်တယ်၊ အနည်းဆုံးတော့ငါ့အတွက် internet နဲ့ wi-fi ကငါ့အလိုလို install လုပ်တဲ့အချိန်ကစပြီး။
တကယ်လို့များသင် install လုပ်ပြီးတဲ့အခါ network ကိုအလိုအလျောက် configure လုပ်မလားမေးတယ်၊ ဟုတ်ကဲ့ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် network manager ကိုအစကနေ configure လုပ်ထားတာလည်းသေချာတယ်၊ ဒါ့အပြင် applet nm-applet ကိုဂရပ်ဖစ် configure လုပ်ဖို့လည်းလိုတယ်၊ ငါ fluxbox အတွက်အသုံးပြုပါ။
အလွန်ကောင်းသည်။ ကောင်းပြီ .. Slackware ကိုသုံးသောအခါကျွန်ုပ်၏ laptop တွင်ဤပြproblemနာရှိသည်။
စကားမစပ်, ငါသည်သင်တို့၏လမ်းညွှန်ချက်များကိုအသုံးပြု။ configure လုပ်ဖို့ :) ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒါဟာတော်တော်အသုံးများတဲ့ပြproblemနာပါ။ အထူးသဖြင့်ငါတို့အတွက်အရာရာကိုလုပ်ပေးတဲ့ distros မှလာလျှင် ...
ဤကဲ့သို့သောမှတ်ချက်များသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အမြဲတမ်းနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အမှန်တကယ်အထောက်အကူဖြစ်စေသည်ဟုခံစားမိသည်။ D ... အသုံးပြုသူများကို Slackware အသုံးပြုရန်အားပေးမှုဤအကြံပြုချက်များကိုကူညီရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
အကြံပြုချက်များဆက်တိုက်ပြုလုပ်ရန်အလွန်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်၊ သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုသည်ဤဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်မျှသာဖြန့်ဝေလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ကောင်းတာကသင်ဟာဒီဘာသာရပ်ကိုမစွန့်ခွာဘဲ Slackware နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုထုတ်ဝေဖို့အခုထိသက်သေအထောက်အထားတွေရှိနေတယ်။
မင်္ဂလာပါ။ SlackTips အကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
ညီလေး = D ဒီနေရာကိုသွားရတာဝမ်းသာစရာပါပဲ။
ငါ Slackware ကမ်ဘာပျေါတှငျစတငျသောအခါ, သင်၏ဘလော့ဂ်ငါ့အဘို့အလွန်အသုံးဝင်ခဲ့, ထိုသို့နေဆဲယနေ့ကြောင်းပြောရမယ် ...
ငါကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ခဏကွာ (အမှန်တကယ် Linux ကိုထံမှ) ကွာခဲ့, ငါပဲနောက်တဖန်အရာအားလုံးကိုပြုပြင်တာပါ, ဒါကြောင့်ငါကသူတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်သောသူတို့အားနည်းနည်းအတားအဆီးကိုတွေ့သောအခါငါ့အတွေ့အကြုံများဖြစ်လိမ့်မယ်မျှော်လင့်, တစ်စုံတစ် ဦး မှအကူအညီ, အခြားသူတို့မွေးဖွားခဲ့ကြသည်ဘယ်လို ဒီ SlackTips;), ဒီကုမ္ပဏီမှာငါတို့ကိုထောက်ပံ့ချင်ရင် you ကြိုဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့တည်မြဲမှုကသာလွန်တယ်။
ငါ Slackware နှင့်အနည်းငယ်ကွာသောကြောင့်မကြာသေးမီကငါသည်အခြား distros (နှင့်အလုပ်အတွက် Windows) ကိုအသုံးပြု။ ငါအကြိုက်ဆုံး distro ၏အသုံးပြုမှုကိုလုံးဝစွန့်လွှတ်လိုက်ပြီ။ Slackware သည်တည်ငြိမ်မှုနှင့်အဓိပ္ပာယ်တူကြောင်းအတည်ပြုရန်အတွေ့အကြုံကကျွန်ုပ်အားကူညီပေးခဲ့သည်။ ငါအသုံးပြုသော "တည်ငြိမ်သော" distro slackware နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, များစွာသော updates များကို (အချို့အသုံးဝင်သောမဟုတ်) အချို့သောပမာဏသည်အမြဲတမ်းတစ်ချိန်ချိန် system ကိုချိုးဖျက်။
လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုသာတပ်ဆင်ခြင်း၊ ပြုစုခြင်း၊ မှီခိုမှုများကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်စနစ်ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာအတိုင်းပြုပြင်ခြင်းစတိုင်ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကိုဘယ် distro မျိုးနဲ့မဆိုလုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် Slackware မှာအဲဒါဟာပိုပြီးသဘာဝကျတယ်။
သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုကျွန်ုပ်သဘောတူသည်။ ထို့အပြင် Slackware မှအခွင့်အာဏာတစ်ခုလုံးမှလာသည်ကိုသင်ငြင်းဆိုသည့်အကြောင်းပြချက်များကြောင့်လည်းငါသည်ဤဖြန့်ဖြူးခြင်းမှဝေးကွာသွားသည်။ ယခုတွင်ငါသည် OpenSUSE ကိုအလွန်ကျေနပ်သော်လည်းအမြဲတမ်းပျောက်နေသည့် Slack ပျောက်ဆုံးသည်။
sbopkg နဲ့၎င်းရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုကြီးမားတဲ့လမ်းကိုနှစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒါတစ်ခုတည်းအတွက်ငါ Slackware ကိုငါ့စက်ထဲကတစ်ခုပေါ်မှာသိမ်းထားတယ်။
ငါမသုံးနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာက slap-get ဖြစ်သည်၊
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် Arch Linux ဟာကျွန်တော့်အတွက်အများကြီးပိုကောင်းပုံရတယ်။ ABS ကိုငါလိုချင်ရင် Slackware လိုမျိုးလုပ်နိုင်တယ်၊ PKGBuilds ထက် Slackbuilds ကပိုများတယ်၊ အဲဒါကငါ့ကိုစနစ်ကိုငါပိုသဘောကျအောင်လုပ်ခွင့်ပေးတယ်၊ သေချာတာပေါ့၊ သူတို့က Slackware ကပိုပြီးတည်ငြိမ်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးပဲလို့ငါ့ကိုပြောတယ်၊ ဒါပေမယ့် Arch တစ်ယောက်ယောက်အတွက်မတည်မငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့အရသာရှိတဲ့ကိစ္စတွေသိပ်မရှိဘူးထင်တယ်။
သူကမင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုသူတန်ဖိုးထားတယ်လို့ပြောခဲ့တယ် .. လူတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့အရသာရှိတယ်၊ ဒီ post မှာ Slackware ကနေသင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုမျှဝေဖို့ဖိတ်ကြားခံရတယ်လို့ခံစားရရင်၊ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ ABlin နဲ့ Archlinux တို့မှာမှတ်ချက်ပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်။ အိုကေ;) ..
Arch Linux ပါတဲ့ဒီ notebook PC ရဲ့ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုရဖို့ကျွန်တော်ဒီစာမျက်နှာရဲ့ဖိုရမ်ထဲမှာနေ့အတော်ကြာခဲ့ပြီးပါပြီ။ အဲဒါကို activate လုပ်လို့မရပါဘူး။ Network controller ကို configure လုပ်လို့မရပါဘူး။ Intel (R) PRO / Wireless 2200BG / 2915 Network Driver ကူညီပါ။
Slack လက်စွဲစာအုပ်ဆီသို့ခြေလှမ်းများမည်မျှပင်တိုင်ပင်ပါစေ၊ FreeCAD, Inkscape နှင့်အခြားသူများကဲ့သို့သောအလုပ်မလုပ်တော့သောရပ်တန့်မှုများသည်ဤထူးခြားသောဖြန့်ဖြူးမှုနှင့်ပတ်သက်သောထူးခြားသောဖြန့်ဝေမှုမှကောင်းသောအကြံဥာဏ်များလည်းရရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ လျှောက်လွှာများ။
Slackware မှာထပ်သင်ခန်းစာယူရတာဝမ်းသာပါတယ်။ ကျွန်ုပ်အပါအ ၀ င်များစွာသောသူများအတွက်ဤမိဘဖြန့်ဖြူးခြင်းသည်မသိသောနယ်ပယ်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသောသတင်းအချက်အလက်၊ ကြီးမားသောပံ့ပိုးမှု၊ စတင်နေသောမည်သည့်အသုံးပြုသူမဆိုအင်တာနက်ကိုမည်သို့စုဆောင်းရမည်ကိုရှာဖွေခြင်း (သို့) slackware အသုံးပြုခြင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာများကိုရူးသွပ်သွားလိမ့်မည်။
မွန်တယ်ရီမက္ကဆီကိုမှနှုတ်ခွန်းဆက်စကား - DMoz !!
Jorgeleitor များ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ Dmoz …ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုချီးကျူးပါတယ်။ AMD duron ပါတဲ့ laptop မှာ slackware 14 ကို set up လုပ်တယ်။ X ကိုမသုံးဘူး။ console မှာလေ့ကျင့်မယ်။ ငါကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကို configure လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါပြီ, ငါ networkmanager command ကိုရိုက်ထည့်သောအခါသူကငါ့ကိုထိုကဲ့သို့သောဖိုင်သို့မဟုတ် directory ကိုမပြောထားသည် ... သူက install လုပ်မထားပါကြောင့်ရှာမတွေ့နိုင်ကြောင်းနားလည်ပါတယ် ... တကယ်တော့ညွှန်ကြားချက်များကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်နှင့်ပထမ ဦး ဆုံးအရာဖြစ်လျှင်ဖြစ်ပါတယ် deactivate wired network ကိုဒီပြproblemနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲ။ cd's မှ networkmanager ကို install လုပ်လို့ရပါသလား။ သင်မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း Malaga မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။